Halkee ku danbeeyey Halyaygii khadkii dhexe Anderson ee Man United guulaha badan la qeybsadey? | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Halkee ku danbeeyey Halyaygii khadkii dhexe Anderson ee Man United guulaha badan la qeybsadey?
Naadiga Internacional oo ka dhisan dalka Brazil ayaa cadesay ineey gacanta ku dhigtay xidigii Manchester United ee khadka dhexe Anderson.
Warka ku saabsan tegitaanka 26-sano jirkaan ayaa soo baxay maalinkii shalay ahayd,markii cayaaryahanka ay iskala tirsanaayeen United ee Juan Mata, uu sheegay in sxbkiis reer Brazilian u rajeeynayo inuu waqti fiican ku qaato kooxda uu ku biirayo ee dalkiisa.
wareegitaanka cayaaryahankan mudada todobada sano joogey United ayaa waxoogaa waxaa ku yimid dib u dhac yar,markii kooxda Internacional ay United-ka kala xaajooneysay Lacagaha ciyaaryahanka uga dhiman heshiiskiisa uu Manchester uga dhinaa.
United ayaana arintaasi xalisay ugu danbeyntii waxaana kooxda Brazilian-ka ah ay gelinkii danbe ee maanta soo dhigeen bogga Twitter sawir ku aadan isagoo saxiixaya heshiis ilaa 2019-oo uu naadiga ka disan Porto Alegre ugu cayaari doono.
Cayaaryahan Anderson oo Red Devils kaga soo biiray Porto sanadkii 2007 isagoo lagu soo qaatay £25m,ayaa ku wareeray joogitaanka kooxda Manchester United,isagoo keliya 10- kulan garoonka arkay labadii xili ciyaareed ee lasoo dhaafay wuxuuna intii uu joogat All Traford kula guuleysatay Man afar koobka Horyaalka PremierLeague iyo hal Champions League.